गोकर्ण गौतम भाद्र ३०, २०७६ १६:२४
कवाडी सामानलाई नयाँ जीवन दिने चार उद्यमी चेली पूरा पढ्नुहोस् »
मनबहादुर बस्नेत भाद्र ३०, २०७६ १५:३६
अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको बैंकिङ प्रणालीमाथिको साइबर हमलामा छरपस्ट तहकिकात पूरा पढ्नुहोस् »
गोकर्ण गौतम भाद्र ३०, २०७६ १३:५५
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट फाइन आर्टमा स्नातकोत्तर गरेर फर्किएको तीन वर्षपछि किरण मानन्धर फ्रान्स गए, सन् १९८३ मा । साथमा थिए, उनका १५ पेन्टिङ । पूरा पढ्नुहोस् »
त्यसपछि रिसाइन् हेली वाल्डविन
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र ३०, २०७६ १६:००
Saptahik मनोरञ्जन समाचार
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र ३०, २०७६ १५:००
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र ३०, २०७६ १४:००
एक्वा एरोबिक्स पानीभित्र बसेर गरिने एक्सरसाइज हो । जिममा एक्सरसाइज गर्दा कतिपयलाई बोर लाग्न सक्छ तर पुलभित्र पानीमा म्युजिकसँग एक्सरसाइज गर्दा रमाइलोका साथमा बढी क्यालोरी बर्न हुन्छ । पूरा पढ्नुहोस् »
अच्युत वाग्ले भाद्र ३०, २०७६ १३:०८
पठित वर्गबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था उल्ट् याउन स्वतन्त्र विचार र मार्गचित्र आउने सम्भावना समाप्त भएको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
Saptahik केवल एक प्रश्न
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र ३०, २०७६ १३:००
रामजी ज्ञवाली भाद्र ३०, २०७६ १२:४०
घरको मुली जन्मदा ग्रह तथा नक्षत्रको अवस्थिति कस्तो थियो भन्ने कुराले पनि घर एवं कोठाको रंग निर्धारण गर्छ । घर रंगरोगन गर्दा वास्तुशास्त्रमा ध्यान दिए घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । रंगले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । रंगले हामीमा सकारात्मक तथा नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । पूरा पढ्नुहोस् »
Saptahik साइन्स एण्ड टेक्नो
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र ३०, २०७६ १२:००
नेपाली बजारमा टीभीएसको डबल डिस्क ब्रेकसहितको नयाँ बाइक अपाचे आरटीआर १६० टुभी भित्रिएको छ । युवा पुस्तालाई लक्षित गरी यो बाइक नेपालमा उपलब्ध गराइएको कम्पनीको दाबी छ । रेसिङ डिकल्स, थ्रीडी लोगो, चम्किलो कलर एवं स्पिडोमिटरको नवीन डायलले यो बाइकलाई स्टाइलिस ढाँचा प्रदान गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
योगेश ढकाल भाद्र ३०, २०७६ ११:५०
भारतीय विदेशमन्त्रीलाई प्रोटोकल देखाएर नभेटेका प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्री भेटेर एकपछि अर्को विवाद निम्त्याए पूरा पढ्नुहोस् »
आस्था कोपिला भाद्र ३०, २०७६ ११:००
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ भाद्र ३०, २०७६ १०:३१
कर्णाली छेउमा आयोजित डल्फिन महोत्सवमा प्रमुख अतिथि बनाइएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई शनिबार बिहान काठमाडौंबाट धनगढी उत्रिए, बुद्ध एयरको उडानमा । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र २९, २०७६ १८:००
गोरखाको पालुङटारस्थित रजगरे माध्यामिक विद्यालय पुन:निर्माण पछि विद्यालय ब्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र २९, २०७६ १७:००
चलचित्रमा विपिनले सेल्फी किङकै शिर्ष भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । रमाइलो कुरा के छ भने यो चलचित्रमा अभिनेता विपिन कार्कीलाई अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवाले जोडीका रूपमा साथ दिँदैछिन् । बर्देवाका लागि यो मुख्य अभिनेत्रीका रूपमा पहिलो चलचित्र हुनेछ । चलचित्रले हास्य कलाकारको कथा भन्ने बताइएको छ । यो चलचित्र कुनै हास्यकलाकारको बायोपिक हो कि ? भन्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
नेमिष गौतम भाद्र २९, २०७६ १६:००
मानिसहरूले चलचित्रको पोस्टर भित्तामा देख्दा पोस्टर टाँस्नेले राम्रै पैसा कमाउँदा होलान् भन्ने अनुमान लगाउँछन् । यद्यपि उनीहरूको पीडा अर्कै छ । ‘पहिले–पहिले पोस्टरको सबै काम गर्दा १ लाखसम्म पारिश्रमिक लिन्थ्यौं । अहिले अधिकतम भनेको ३५ हजारसम्म हो, तर त्यो पैसा उठाउन पनि सकस नै हुन्छ । केही राम्रा व्यानरले पुरै पैसा दिन्छन् । अधिकांशले आधा पैसा दिन्छन्, बाँकी पैसा त माया नै मार्नुपर्छ’ पूरा पढ्नुहोस् »
नेपाल संवाददाता भाद्र २९, २०७६ १५:४६
नेपाल संवाददाता भाद्र २९, २०७६ १५:१९
चलचित्र हेर्न कसलाई मन पर्दैन ? यदि बनाउन पनि सिपालु हुनुहुन्छ भने अवसर आएको छ ।काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण चलचित्र महोत्सव (किम्फ) ले सर्ट फिल्म प्रतियोगिताका लागि आह्वान गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र २९, २०७६ १५:००
मानिसहरू स्वस्थ एवं तन्दुरुस्त रहन विभिन्न किसिमका व्यायाम गरिरहेका हुन्छन् । परिवर्तित समयसँगै यसरी गरिने व्यायामको शैलीमा समेत भिन्नता आउन थालेको छ । यसैको कारण हुन सक्छ, केही समययता नेपालमा पनि एक्वा जुम्बा लोकप्रिय हुँदै गएको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
माधव घिमिरे/विराटनगर भाद्र २९, २०७६ १४:०९
जताततै सडक निर्माण, हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी पूरा पढ्नुहोस् »
समुद्रको किनारमा प्रियंका
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र २९, २०७६ १४:००
प्रदेश नम्बर १ मै पहिलो पटक झापाका दुई वटा स्थानीय तहले विद्यालयको आधारभूत तहमा पाठ्यक्रम बनाई पठनपाठन शुरु गरेका छन् । विर्तामोड नगरपालिका र हल्दीवारी गाँउपालिकाले आधारभूत तहमा शैक्षिक सत्र २०७६ बाट आफैले बनाएको पाठयक्रम शुरु गरेका हुन् । पूरा पढ्नुहोस् »
प्रदेश र स्थानीय तहले स्वन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमा समेत संघीय सरकारका मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नछाडेपछि टोल र वडास्तरका कार्यक्रममा समेत द्वन्द्व देखिन थालेको छ । पछिल्लो पटक संघीय सरकारका शहरी विकास मन्त्रीले तामझामका साथ नेपालगन्ज उमहानगरको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन गरेपछि आफ्नो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका छन् । पूरा पढ्नुहोस् »
संघीयता कार्यान्वयनपछि बनेको कान्छो जिल्ला रुकुम पूर्वको सदरमुकाम विवाद अझै ट‌ुंगिएको छैन । विवादका कारण संरचना निर्माण सुरु भएको छैन । हाल सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटमा भौतिक संरचना अभावले सेवा प्रवाहमै समस्या देखिएको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
भरत जर्घामगर/सिरहा भाद्र २९, २०७६ १३:३८
अनोज रोक्का भाद्र २९, २०७६ १३:२५
रामजी ज्ञवाली भाद्र २९, २०७६ १३:१७
Saptahik Youtube वाच
साप्ताहिक संवाददाता भाद्र २९, २०७६ १३:०३
लोकप्रिय गायिका अञ्जना गुरुङ र गायक कन्हैया सिंहको आवाजमा नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । गायिका अञ्जनाको पछिल्लो एल्वम ‘मिठास– ३’ मा समावेश ‘ठ्याक्कै भेटौंला’ भेटौंला बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतको म्यूजिक भिडियोमा जेम्स बिसी र अपेक्षा सिंहले अभिनय गरेका छन् । गीतमा अभिनय गर्ने अपेक्षा गायक/गायिकाकी छोरी हुन् । पूरा पढ्नुहोस् »